Daawo: Cabdiqani Ismaaciil oo ah Wiil Soomaaliyeed oo ku guulaystay Orodka Dheer oo Lagu Qabtay Dalka Jarmalka - Hablaha Media Network
Daawo: Cabdiqani Ismaaciil oo ah Wiil Soomaaliyeed oo ku guulaystay Orodka Dheer oo Lagu Qabtay Dalka Jarmalka
HMN:- Cabdiqani Ismaaciil Aadan oo ah Wiil Soomaaliyeed oo degan dalka Jarmalka ayaa Kaalinta Koobaad ka galay Tartanka Orodka dheer ee loo yaqaano (Half Marathon), oo lagu Qabtay magaalada Würzburg ee gobolka Bayern, Iyadoo Tartankan oo Sanadle ah uu qabsoomay maalintii Axada ee aynu soo dhaafnay.
Tartanka uu kaalinta Koobaad ku galay Cabdiqani oo ahaa mid Xiiso badan, ayaa waxaa ka qayb Galay dad aad u Tiro badan, Iyadoo la Ordayey 21 kiiloo mitir, Wuxuuna Cabdiqani Horey ugu Guulaystay oo kaalinta Koobaad ka galay Orodka 10-ka Kiiloo Mitir.
Wargeysyada iyo Warbaahinta kala duwan ee dalkaasi kasoo baxa ayaa siwayn uga Faalooday Guusha Dhinaca Orodka ah ee Cabdiqani Ismaaciil, iyadoo hada la sheegay inuu Rajo badan Ku leeyahay Orodka.
HALKAN KA DAAWO MUUQAALKA GUUSHA UU GAADHAY
Cabdiqani oo aan Khadka Taleefanka kula xidhiidhay ayaan ugu horayn waydiiyey Inuu Sharaxaad ka bixiyo Tartanka uu ka qayb galay ayaa sheegay inuu yahay Tartan Sanadkiiba la qabto Hal mar, islamarkaana ay tahay markii 21-aad ee dalkaasi lagu qabto, Wuxuuna Xusay inuu Hada Ogaaday Awooda uu u leeyahay Orodka, Islamarkaana uu Dedaalka Halkaasi kasii wadi doono, Hadii alle idmo.
Bulshada Soomaaliyeed ee Burburkii dalka kadib u hayaantay Daafaha Caalamka ayaa Door Muuqan kara waxay ku dhexleeyihiin dhamaan dadalka magangelyada Siiyey ama ay Sharciyada ka haystaan.
Waxaa diyaariyey: Axmed Cabdiqaadir Ismaaciil ( Ahmed Darwiish )